कोरियामा हुनुहुन्छ?लगातार एसी मा बस्ने बानी छ ? यो हेर्नुहोस। – korea pati
August 3, 2020 Korea patiLeaveaComment on कोरियामा हुनुहुन्छ?लगातार एसी मा बस्ने बानी छ ? यो हेर्नुहोस।
गर्मी बढ्दो छ । गर्मीमा कसरी सितलता प्राप्त गर्ने ? अहिले यसका अनेक विकल्प छन् ।
तपाईं÷हामीले आफ्नो वासस्थान, कार्यथलो आदिलाई वाताअनुकुलित बनाएर बस्न सक्छौं । किनभने कुलर, एसी जस्ता विधुतिय उपकरण अहिले सहज र सर्वत्र उपलब्ध हुन थालेको छ ।
कोरियाको औधोगिक उत्पादन १२ बर्ष यताकै कम , साना तथा मझौला कम्पनीहरु संकटमा